AMPANDRANA ANDREFANA : Tovolahy tratra nangalatra finday, saika matin’ny fitsaram-bahoaka
Andiana zatovo na koa mbola zaza tsy ampy taona mihitsy amin’izao fotoana izao no lasa mpanendaka sy mangarom-paosy saron’ny polisy mivezivezy eto an-drenivohitra. 9 novembre 2018
Ireo olona tratra hariva matetika no tena jonoin’izy ireo saingy raha ny tranga hita tato ho ato dia tsy mifidy fotoana hanatanterahana izany intsony ireto olon-dratsy. Ankoatra ny mampalaza ratsy ny faritra manodidina an’Ambodin’Isotry, 67 ha ary ny eny amin’ny tetezan’Ampasika iny dia mahoraka amin’ny fanendahana sy vaky trano ihany koa ny eny Bel’air sy ny manodidina an’ Ampandrana. Toy ny tranga nisy omaly tolakandro izao dia tovolahy iray manodidina ny 20 taona teo no saron’ny fokonolona nanendaka lehilahy iray nandeha an-tongotra.
Finday no nokasainy hangalarina saingy tratra ny tsy nampoiziny ity farany. Avy hatrany dia tezitra ireo andiana lehilahy, miampy ireo mponina nahita maso ny zava-niseho ary nidaroka sy namono azy. Nitangorona ny olona ary niteraka fitohanan’ny fiara minitra maro izany. Feno ratra ny vatan’ilay tovolahy ary saika tsy namelan’ireo mponina raha tsy alatsaka ny ainy. Niezaka nitsoaka anefa torana teo Bel’air itsy farany. Soa ihany fa tonga haingana ny polisy fa raha tsy izany dia saika nahalatsaka aina indray ny fokonolona.
Raha ny filazan’ny mponina eny amin’ny manodidina dia efa leo ny halabotry ataon’ ny olon-dratsy izy ireo ka raha vao mahita tranga tahaka izao dia tsy miandry mpitandro filaminana intsony fa tonga dia mamono izay mpanao ratsy tratra. Efa tonga eny anivon’ny mpitandro filaminana ny famotorana ity tranga ity ankehitriny. Eo anatrehan’ny tsy fandriampahalemana mirongatra ity hatrany anefa dia miezaka ireo tompon’ andraikitra eo anivon’ny mpitandro filaminana mikaroka ireo olon-dratsy. Manantena fiaraha-miasa akaiky amin’ny vahoaka anefa izy ireo raha ny loharanom-baovao voaray matetika. Marihina mantsy fa ny tsy fisian’ny fifampitokisana hatrany no mampirongatra ny fitsaram-bahoaka, nisesisesy hatramin’izay.